पति पत्नी बीच मिल्दैन तालमेल ? यसो गर्नुहोस् – Online Khabar 24
पति पत्नी बीच मिल्दैन तालमेल ? यसो गर्नुहोस्
October 4, 2021 by admin admin
यी उपाय अप्नाउनुहोस्शिव लिंगको पुजाःपति पत्नीले आफ्नो झगडाबाट बच्नका लागि सोमबार एकसाथ भगवान् शिवको पुजा आरधना गर्नु भएमा तपाईको सम्बन्धमा सुधार आउन सक्छ। सिन्दुरको डिब्बा पति सुत्ने ठाउँमा राख्नेः यदी पती पत्नीबीच झगडा भइरहन्छ भने पत्नीले पतिलाई नसोधेर पति सुत्ने ओछ्यानको मुनी सिन्दुरको डिब्बा राखिदिनु पर्दछ। त्यसपछि बिहान उठेर उक्त डिब्बाको सिन्दुर लगाउने गर्यो भने पनि तपाईको कुण्डलीको दोष मेटिन सक्छ।
सूर्यलाई जल चढाउनेःविवाहित जोडिले हरेक बिहान सुर्यलाई जल चढाउने गर्यो भने पनि तपाईबीच हुने गरेको झगडा प्रेममा परिनत हुन थाल्दछ।गौमती चक्रःयति तपाई पति पत्नीबीच प्रेम बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले लगाउने गरेको सिन्दुरको डिब्बामा एउटा गौमती चक्र राख्नु पर्दछ। किनकी उक्त चक्रलाई शुभ मानिने गरिन्छ।
यसैगरी हरेक व्यक्तिमा आफू कस्तो स्वभावको छु भनेर जान्ने इच्छा हुन्छ। आफ्नो मात्रै नभएर आफ्ना नजिकको साथीभाई, आफन्त र प्रेमीप्रेमिका कस्तो स्वभावका छन भनेर जान्नेहरु पनि उत्तिकै हुन्छन। कतिपयले वैवाहिक जीवन अगाडी म कस्तो युवा/युवतीसँग जोडिदै छु भन्ने कुरा बुझ्न खोज्छन।
चैत्रः ज्योतिष शास्त्रानुसार चैत्र महिनामा जन्म लिनेहरुको उच्च बौद्धिक क्षमता हुन्छ। सुन्दर मुहार कृति भएका यिनीहरु हँसिला हुन्छन। रिसाहा र अहंकारी स्वभावका हुन्छन। रचनात्मक क्षेत्रमा बिशेष रुचि राख्छन। बिलक्षण प्रतिभाका यिनीहरु परिवारको बढी ध्यान राख्छन्।एजेन्सी
Prevविवाह पछि स्त्रीलाई हुन्छ यी पाँच कुराको पछुतो !
nextछोराले आमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पुर्याएपछि आमाले भनिन् छोरा तिमी…..